Izindlela eziyisikhombisa zokumisa i-multiboot ngeWindows 8 neLinux | Kusuka kuLinux
Izindlela eziyisikhombisa zokusetha i-multiboot ngeWindows 8 neLinux
UCharlie-Brown | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ibhodi leGigabyte UEFI
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule umngani omuhle ubenenkinga ngencwajana yakhe entsha (njengoba bekulindelekile eza nayo UEFI ne-Windows 8 efakwe ngaphambili) izama ukufaka i-Arch ku 'boot ebili' ngaphandle kokuphumelela. Ngemuva nje kokuthi ngisuse ukwahlukaniswa kweWindows futhi ngafaka kuphela Arch, Ngithole i-athikili kwelinye lamasayithi engikuthandayo, okuchaza izindlela ezi-7 ezahlukahlukene zokumisa i-multiboot ezinhlelweni zeWindows 8.
Ngokwesiphakamiso salo mngani, owathola imininingwane sekwedlule isikhathi, nginqume ukuhumusha yonke indatshana ukuze ngiyenze itholakale kuwo wonke umuntu, ukuze labo abangakwazi ukuyifunda ngolimi lwayo loqobo bakwazi ukuthola izeluleko zakhe, kepha, njengoba ngihlala ngincoma kubo bonke abanethuba, iya ngqo kumthombo wokuqala ozohlala ucebe ukudlula noma yikuphi ukuhumusha.
Njengolwazi lokuqala, i-athikili okukhulunywa ngayo eyokugcina ochungechungeni lwe-3 ngesihloko esifanayo, esishicilelwe ngumbhali encwadini yakhe blog endaweni ZDnet.com, engincoma ukuthi ifundelwe labo abafuna ukungena emininingwaneni ngalolu daba. Mayelana nomlobi ofanayo, igama lakhe ngu UJA Watson futhi une-resume ehlaba umxhwele ayichaza kanjena: “Ngaqala ukusebenza nalokho esikubiza ngokuthi 'ama-analog computer' ekunakekelweni kwezindiza ne-United States Air Force ngo-1970. Ngemuva kokuqeda umsebenzi wami wezempi futhi ngabuyela eYunivesithi, ngangeniswa kuma-microprocessors nohlelo lolimi lomshini kuma-processor we-Intel 4040. Ngemuva kwalokho ngabuye ngasebenza, ngalawula futhi ngahlela imishini evela ku-Digital Equipment Corporation PDP-8, PDP-11 (/ 45 kanye / 70) nakumakhompyutha amancane i-VAX. Ngangibandakanyeka kugagasi lokuqala lama-microcomputer asekelwe e-Unix, ekuqaleni kwawo-80. Bengisebenza ekuthuthukiseni isoftware, ekusebenzeni, ekufakweni nasekusekeleni kusukela lapho.
Lokho kusho, ngaphandle kokuqhubeka, nansi ukuhunyushwa kwendatshana okukhulunywa ngayo, engigcizelela kuyo, konke ukufaneleka kungokwombhali wokuqala futhi noma yimaphi amaphutha okungenzeka enziwa yimina uqobo.
Ingxenye enhle yamazwana kokuthunyelwe kwami ​​kwakamuva mayelana nokufaka i-Fedora kwi-laptop yami entsha kube nomphumela wokuthi "esikhundleni sokusitshela okungasebenzi, sicela usinike imininingwane emincane mayelana nezinketho esinazo zokwenza umsebenzi" .
Iseluleko esihle, futhi ngiyajabula ukusisebenzisa. Uma konke esikwenzayo ukuhlala phansi sikhononde nge- i-dont boot I-Linux kumasistimu UEFIKungenzeka ukuthi sibadikibalise abanye abantu ekukuzameni, kanti iqiniso ukuthi kunezinketho ezisebenza ngaphandle komzamo omkhulu.
Okokuqala, nokho, ngizophinda okuthile engikushilo kaningi ngaphambili. Ukuqaliswa ngakunye kwe-firmware UEFI kuhlukile - futhi hhayi nje ukwehluka kancane, noma yikuphi.
Ezinye zisebenza kahle kakhulu ngokufakwa kweLinux, zihlanganisa amabhuthi ngokushelela kusukela ekuqaleni. Ezinye zinzima, azilindeleki, futhi zicasukile ngokungahambisani kwazo futhi zibonakala ziphuma endleleni yazo ukuvimbela iLinux ekuqothuleni. Ngakho-ke uma ufuna ukufaka i-boot nge-Linux ne-Windows, zama ukuthola incazelo ebhalwe ngumuntu onesistimu efanayo oyisebenzisayo, noma okungenani uhlelo oluvela kumkhiqizi ofanayo.
Kulungile, ayini-ke amathuba?
1. Faka i-Linux GRUB boot loader
Yebo, eyokuqala futhi ngokuqinisekile elula kunazo zonke uma isebenza kahle, ukufaka i-bootloader I-GRUB I-Linux njenge-boot boot ezenzakalelayo, futhi inokulawula ukubhuthwa okubili nge-Windows.
Ukuze wenze lokhu, kunjalo, kufanele ube nokusatshalaliswa kweLinux okuhambisana nakho UEFI - engizamile futhi engafakazela ukuthi yibo vulaSUSE, Fedora, I-Linux Mint y Ubuntu, kepha kukhona abanye futhi kuseza okuningi kungekudala.
Uma unokusatshalaliswa kwe-Linux okusekela i-boot evikelekile UEFI, Awudingi ngisho nokushintsha izilungiselelo zokumisa UEFI, yize abantu abaningi bezokhetha ukukhubaza i-Secure Boot noma kunjalo.
Lapho ufaka ukusatshalaliswa kwe-Linux okusekela UEFI, uma yonke into isebenza ngendlela efanele nokuhlelwa kwe-firmware UEFI kusebenza kahle futhi awutholi i- "reboot" embi (okuthile engikubonile kwenzeka kaningi kakhulu), ngakho-ke ukuqala kabusha kabusha ngemuva kokufakwa okugcwele kuzokutholela imenyu yokuqalisa ye I-GRUB, futhi uzokwazi ukukhetha phakathi kweLinux (okuzenzakalelayo) noma iWindows 8 ukuqala kuyo.
Ngaleso sikhathi ucishe ukhululeke ekhaya - kepha khumbula ukuthi ngiye ngazibonela mathupha (futhi uqobo ngabanakho) amasistimu okuthi kamuva, asethe kabusha amasethingi ebhuthini leWindows ngaphandle kwesizathu esithile. Uma lokhu kwenzeka, kufanele ucabangele ukusebenzisa enye yezindlela ezichazwe ngezansi, njengoba amava ami ebe ukuthi lokhu akwenzeki kanye.
2. Sebenzisa ukhiye wokukhetha i-BIOS boot
Ithuba lesibili ukuthi ukhetha ukusatshalaliswa kwe-Linux okuhambisana ne- UEFI, ukuthi ukufakwa kwenziwa kahle kakhulu, kepha uma uqala kabusha ngivuka neWindows esikhundleni seLinux. Lokhu kungasabisa kakhulu, kepha empeleni akunzima kangako ukusebenza nakho.
Into ebalulekile okufanele uyikhumbule ukuthi ukufakwa kweLinux kuzenezele ohlwini lokuqalisa - kufanele ukwazi ukufika kulolo hlu ukuqala.
Indlela elula yokwenza lokhu ukusebenzisa inketho ye-BIOS Ukukhethwa kwe-Boot, elenziwa lasebenza ngokucindezela ukhiye okhethekile ngesikhathi sokuvula noma sokuqalisa kabusha inqubo. Lokho 'kukhiye okhethekile' kuyahlukahluka phakathi kwezinhlelo, sengikubonile Escape, F9 y F12 isetshenziswe kwezinye izinhlelo zami, futhi ngiyaqiniseka ukuthi kukhona ezinye.
Ukuyicindezela kuzophazamisa inqubo ye-Windows boot futhi uzothola uhlu lwezinhlelo zokusebenza ezikhona - mhlawumbe iWindows 8 neLinux. Mina ngokwami ​​anginaki le nketho ngoba angithandi ukungena 'ekugijimeni' ngenqubo yokuqalisa ukuze ngiqiniseke ukuthi ngishaya ukhiye wokukhetha i-boot ngesikhathi, futhi uma ngiphazamisekile noma ngihamba kancane ngibe kufanele uhambe yonke indlela. ngokusebenzisa iWindows boot futhi umane uqalise kabusha ngokushesha ukuze ubuyele kwimenyu yokukhetha ama-boot.
Kepha lokhu kubonakala kungenandaba nabantu abaningi, futhi ngokuqinisekile kuyinketho edinga ukugoqana okuncane futhi ulwe nezilungiselelo ezinamandla ze-BIOS. Enye indlela okungenziwa ngayo kube lula kancane ukungena kusethaphu ye-BIOS bese ukhetha ukubambezeleka kokuqalisa, amasistimu amaningi akuvumela ukuthi usethe ukubambezeleka kwesibili okungu-5-30 ngaphambi kokuthi ama-Windows abhuqe empeleni, okunikeza isikhathi esiningi sokucindezela ukhiye womlingo .
3. Nika amandla 'i-Legacy Boot'
Ithuba lesithathu "elilula" ukunika amandla 'Ifa Bootkuzilungiselelo ze-BIOS bese umane ungayinaki yonke into mayelana UEFI.
Le akuyona inketho engiyithandayo mina ngokwami, ngokwengxenye ngoba nginenkani futhi ngokwengxenye ngoba, njengoba u-Adam Williamson angichazela esikhathini esithile esidlule, kunezinzuzo ezithile zokuqalisa. UEFI. Kepha ngokuqinisekile kuyindlela esebenzayo, futhi ngokuya ngokufaka i-Linux efakiwe nokubhutha, empeleni kungaba yisixazululo esilula kunazo zonke.
Inkinga kuphela engiyibonile ngale ndlela ukuthi ezinye izinhlelo zenza kube nzima ukunika amandla 'Ifa Boot', noma kungenxa yokuthi inketho ifihlwe kahle ekusethweni kwe-BIOS, noma ngoba kufanele usethe iphasiwedi ye-BIOS ngaphambi kokuthi ikuvumele uyishintshe. Ngizwile ukuthi kungahle kube nezinhlelo ezithile ezingabala 'Ifa Boot'cha, kepha angikaze ngibone okunje.
Kunoma ikuphi, ukukhetha le ndlela akugcini nje ngokwenza izinto zibe lula kakhulu ekusethweni nasekusetheni okubili kwe-boot, kepha futhi kukuvumela ukuthi ufake cishe noma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Linux okufunayo, ngaphandle kokuhambisana UEFI.
Mina uqobo ngisebenzise le nketho ukufaka ukusatshalaliswa okungewona we-Linux UEFI, njenge SolydXK, I-PCLinuxOS y I-Linux Mint Debian Edition ekucushweni kwama-multi-boot nokunye ukusatshalaliswa okuhambisana ne-UEFI. Ngakho-ke ngingabuyela emuva ngikhubaze Ifa Boot, bese usebenzisa i- I-GRUB iyahambisana UEFI ukuqala i-Linux engasekelwa.
Isine. Zama ukusebenzisa i-Windows bootloader
Ithuba lesine kufanele kube ukusebenzisa i-Windows boot loader nge-Linux boot ebili. Ngithi kufanele kube njalo, ngoba abantu baqhubeka nokuthumela imibono ethi 'sebenzisa nje I-EasyBCD ukuyilungiselela ", noma usebenzise" ukusetshenziswa bcdedit'Kodwa zama ngangokunokwenzeka, angikwazi ukukuthola kusebenze.
Ngibhale ngalokhu ngonyaka noma ngaphezulu edlule lapho nginohlelo lwami lokuqala UEFI, futhi ngicabanga ngaleso sikhathi ukuthi inkinga bekuyilokho nje I-EasyBCD ayizange ilungiswe ngokuphelele ukumelana nokuqala UEFI, kepha manje sengizamile futhi, ngenguqulo yakamuva ye I-EasyBCD engingayithola kuwebhusayithi ye NeoSmart futhi namanje angikwazi ukwenza i-Linux ivuleke nhlobo.
Manje ngingaqina kakhulu ukuthola, kepha uma othile ezongena afake amazwana athi "kusebenza kahle", ngakho-ke ngicela uzilungiselele ukucacisa, futhi unikeze imininingwane eqondile yalokho okwenzile ukukutholela sebenza. Ngoba ngizame konke engingakucabanga, futhi noma ngabe ngenzani, ukuphela kwento engiyitholayo lapho ngizama ukuqala noma yikuphi ukufakwa kweLinux ngumyalezo othi "Windows ihlulekile ukuqala".
Ngiphinde ngaseshela iwebhu ukuthola eminye imininingwane, futhi izibonelo eziwukuphela kokhonkolo engingazithola yilabo abahluleke ngendlela efanayo nami. Ngingathola izindawo eziningi ezithi «I-EasyBCD works ", futhi" use I-EasyBCD ye-multiboot Windows 8, 7, Vista, XP, MacOS neLinux ", kepha hhayi OKODWA othi" sikwenze lokhu ngeWindows 8 UEFI kanye neLinux, kuyasebenza, futhi yilokhu okufanele ukwenze ».
Engikwenzile kwaba okulandelayo. Ngilayishe ngafaka I-EasyBCD 2.2 ezinhlelweni ezimbili zeWindows 8 UEFI ehlukile (i-HP Compaq esanda kutholwa ne-Acer Aspire One 725 yami). Lapho ngangibaleka I-EasyBCD (njengomphathi weqiniso) ngamangala ukuthi uhlu lwezinhlelo zokusebenza luvele ukulungiselela ukucushwa kwe-boot yakho. Ngiyazi ukuthi i-Windows bootloader ibingayiboni noma inikela ngokuqalisa noma yini enye ngaphandle kweWindows 8. Kungithathe umzuzu ukubona ukuthi okubhalwe ohlwini bekuyikho konke okusohlwini lwe-BIOS boot.
Yilokho kanye obekunganikezwa uma ngisebenzisa inketho yokukhetha i-boot, njengoba kuchaziwe ngenhla, kepha uma ngivumela iWindows boot ngokujwayelekile bekungekho uphawu lwalaba abanye. Noma ngibeka ukubambezeleka kwesibili kokuqalisa kweWindows, ngisebenzisa bcdedit o I-EasyBCD, ibizoma bese ibala kuphela iWindows 8. Manje kungani I-EasyBCD Ingabe ibhalise konke okunye? Bengingaqondi, kepha benginethemba lokuthi kungaba yisibonakaliso esihle, sokuthi I-EasyBCDOkungenani uthole ezinye izinketho, futhi konke obekufanele akwenze manje ukubangeza kwimenyu ejwayelekile ye-Windows bootloader.
Ngizamile ukukwenza lokho, ngiqala ngokumaka okunye kokuhanjiswa kweLinux njengento yokuqalisa ezenzakalelayo. I-EasyBCD Kuyangivumela ukuthi ngikwenze lokho ngaphandle kwezikhalazo, kepha lapho ngiqala kabusha ngabona ukuthi ibuya ngqo neWindows. Bah !.
Ngakho-ke ngazama ukusebenzisa inketho ethi "Faka" ku- I-EasyBCD, futhi ngamnika lonke ulwazi ngengxenye eyodwa yeLinux. Ngalesi sikhathi okungenani lapho ngiqala kabusha kukhombise inketho yeLinux ohlwini lwama-boot, kepha lapho ngizama ukuyivula yanginika umyalezo othi "IWindows Boot Yehlulekile". Ngimemeze ikhompyutha enkulu ukuthi ibingazami nokuqala iWindows, ngakho-ke yehluleka kanjani, kepha lokho akusizanga nakho.
Ngemuva kwalokho ngabona ukuthi engangikusungula empeleni I-EasyBCD bekuwumzamo wokuqalisa into ebizwa nge / NST/neogrub.efi (noma into enjalo, anginalo igama eliqondile ekhanda lami njengamanje, futhi ngiyagula I-EasyBCD kanye neWindows, ngakho-ke angizukuyibuka futhi).
Ngakho-ke ngazama ukufaka amafayela amaningi we-boot ngalelo gama - ekuqaleni ngazama isithombe se-grubx64.efi kusuka kokunye ukusatshalaliswa kweLinux, ngabe sengizama ukukopisha i-boot block (ama-byte angama-512 wokuqala) kusuka kudiski kanye / noma kusistimu yamafayela we-Linux , njengoba nje kufanele kwenziwe ukuze kubhuthwe kabili ngeWindows XP neLinux, bese ngiphelelwa yithemba futhi ngafaka i-Linux kernel ngaphansi kwalelo gama. Vele, akukho neyodwa yazo esebenzayo.
Ekugcineni nginqume, ngokuya ngesipiliyoni sami kanye nokuntuleka kwezindaba zempumelelo noma imininingwane yangempela yokumiswa kuwebhu, lokho I-EasyBCD akusizi ngalutho ekwakheni i-bootable Windows / Linux dual-boot UEFI inikwe amandla. Kungenzeka ukwazi ukuyisebenzisa uma inikwe amandla Ifa Boot, Bese usetha kahle ngendlela okwenziwe ngayo kwiWindows XP, kepha uma uzokwenza lokho vele usebenzise indlela yesithathu engenhla bese uzisindisela ithoni yenkinga.
Ngemuva kokulwa ne- I-EasyBCD Isikhathi eside, futhi ekugcineni ngiyekile, nginqume ukuzama insiza ye-bcdedit, okuyindlela ejwayelekile ye-Windows yalolu hlobo lokucushwa. Ngilwazi kahle lolu hlelo, ngilusebenzisele ukusetha i-double-boot ngeWindows XP, ngakho-ke bengingazulazuli kahle ebumnyameni.
Kepha-ke futhi, noma ngabe ngizamile kanjani, ngeke ivuleke. Ngingathola into yeLinux ingezwe kumenyu ye-Windows bootloader, futhi ngingahle ngisethe zonke izinhlobo zezinto ezahlukahlukene njenge-boot object, kepha ayikho neyodwa esebenzayo. Okokugcina, ukuze ngizitholele ngokwami ​​ukuthi bengingenzi nje okuthile okungahambi kahle (noma okuyisiphukuphuku), ngibeke into ebhuthini komunye wemizamo yami yeLinux yokuba yiWindows 8 futhi yaqala ngokushesha. Grrrr!.
Ngakho-ke, isiphetho sami kukho konke lokhu ukuthi, esinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani I-EasyBCD akusizi ngalutho ekwakheni i-Linux dual boot, empeleni akunakwenzeka ukusebenzisa i-Windows 8 bootloader ukuqala i-Linux nge-boot UEFI inikwe amandla. Futhi, kungenzeka nge-Legacy Boot enikwe amandla, kepha angikhathali ngokwanele okwamanje ukuthola.
Uma wazi ukuthi nginephutha kulokhu, futhi ngilungiselele mathupha uhlelo lwe-Windows 8 ukuqala i-Linux usebenzisa i-Windows bootloader, bese ungitshela kumazwana, ngicela, sicela cacisa futhi usho ukuthi ukwenze kanjani, ngoba ngithanda ukwazi.
5. Faka i-bootloader ehlukile
Inketho yesihlanu ye-multiboot UEFI ukufaka i-bootloader ehlukile, efana ne- I-REFInd nguRoderick W. Smith. Lokhu kunenzuzo yokukwazi ukuqala cishe noma yini - iWindows, iLinux, iMacOS - futhi inamandla amakhulu futhi iguquguqukayo ekufuneni ngokuzenzakalela okungaba kudiski, ukuyethula njengohlu lokukhetha amabhuthi.
Ngeshwa, okuwukuphela kwento engayixazululi yinkinga "yokusebenzisana / engalindelekile yokusetha i-BIOS" echazwe ngenhla. Uma iWindows noma inqubo yokuqalisa, noma enye into ihlangana nezilungiselelo ze-BIOS futhi ikuvimbela ekusetheni unomphela I-GRUB njenge-bootloader ezenzakalelayo, lapho-ke cishe izovimbela ukusethwa kwe- I-REFInd.
6. Zama enye indlela yesikhashana
Inketho yesithupha ayisona neze isixazululo senkinga yokuhlela engasebenzisani / engalindelekile ye-BIOS, kunalokho kuyinto yokusebenza okwesikhashana kwayo.
Kuvela ukuthi ngaphezu kohlu olujwayelekile "lwe-boot sequence" ekucushweni kwe-boot UEFIKukhona futhi inketho "yokuqalisa okulandelayo", ecacisa ukumiswa kwebhuthini yesikhathi esisodwa.
Lokhu kuvamise ukungabi nalutho, ngakho-ke uhlelo lulandela uhlu lokulandelana kwebhuthi, kepha uma lisethiwe, uhlelo luzozama ukuqala leyo nto kuqala, futhi kuyabonakala futhi ukuthi isethwe ukuze ibhuthi elandelayo ibuyele ekusetshenzisweni kokuzenzakalelayo uhlu lokulandelana kwebhuthi.
Ukulungiswa kwe- "boot elandelayo" kungashintshwa kusuka ku-Linux kusetshenziswa efibootmgr -n XXXX, lapho i-XXXX iyinombolo yento yohlu lwama-boot, ukuthola izinombolo zokufaka ze-Linux, vele usebenzise i-efibootmgr ngaphandle kokukhetha (noma i-efibootmgr -v uma ufuna ukubona yonke imininingwane ecacile) - Inombolo izoba into efana ne-0001 noma i-0002 ezimeni eziningi.
Le nketho ye- "next boot" ingaguqulwa ibe umsebenzi owenziwa unomphela ngokungeza umyalo we-efibootmgr kuzikripthi ze-Linux boot, ngakho-ke njalo lapho amabhuzu e-Linux ezosethwa kabusha ukuze iphinde ivule i-Linux ngokuzayo. Kanye. Angishongo ukuthi ipholile, noma yinhle, noma yinhle, kepha iyasebenza, ngoba ngizamile.
7. Ukukopela inqubo yokuqalisa ezenzakalelayo
Ekugcineni, inketho yesikhombisa "ukukopela" inqubo yokuqalisa ezenzakalelayo ngokufaka isithombe se-shim.efi Linux (noma i-grubx64.efi uma ukhubaza I-Boot evikelekilelapho iWindows Boot Manager ivame ukutholakala khona.
Kuzinhlelo engizihlolile, lokhu kusehlukweni lokuqalisa EFI (uqobo / dev / sda2 ku-Linux, ifakwe njenge / boot / efi), ngaphansi kwegama /EFI/Microsoft/Boot/Bootmgfw.efi. Ngibe nempumelelo ethile ekwenzeni lokhu, kepha ngiyakuxwayisa ukuthi ezinye izinhlelo (ikakhulukazi i-HP Compaq) zinolaka kakhulu ngokubheka nokusetha kabusha ukumiswa kwe-boot UEFI Ngokuzenzekelayo kwesinye isikhathi bayabona ukuthi iBootmgfw.efi empeleni ayilona uhlelo "lwangempela" olufakiwe, bese ithola ikhophi yoqobo bese iyibuyisela endaweni yayo, ngaleyo ndlela ihlehlise inkohliso enobuqili. Ungacabanga ukuthi kuyacasula futhi kukhungathekise kanjani lapho lokhu kwenzeka ...
Ngakho-ke unayo. Izinketho eziyisikhombisa ezihlukile zokulungiselela i-multiboot ngeWindows 8 neLinux.
Ngicabanga ukuthi kukhona abanye ebengingacabangi ngabo, noma engingabakhumbuli njengamanje, kepha lezi yizo engicabanga ukuthi zisobala kakhulu.
Ngibazamile bonke ngesikhathi esisodwa noma kwesinye. Okuhle kunakho konke futhi okulula kunazo zonke kungokokuqala, kufanele nje ufake i-boot I-GRUB, uma isebenza kusistimu yakho ethile. Ngiyazi futhi ukuthi abanye abantu bafunga ukuthi inketho yesibili yanele, ngokucindezela nje Khetha iBoot, nokuthi bacabanga ukuthi ngiyavilapha futhi nginenkani ngokungayisebenzisi leyo.
Ngale kwalaba bobabili, kungadinga ukuzinikezela okuningi, ukufunda, nokulingwa nephutha ukwenza abanye basebenze (abanye angikaze ngisebenze njengamanje). Kepha ngokuhamba kwesikhathi, uma uzimisele ngokuhlanganisa i-boot Linux ne-Windows, kufanele ukwazi ukukwenza.
Yebo, kuze kube manje ukuhunyushwa kwendatshana yokuqala, ngiyethemba kusiza labo abanenkinga efanayo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Izindlela eziyisikhombisa zokusetha i-multiboot ngeWindows 8 neLinux
Ngiyaxolisa ukuphawula ngento engeyona ingqikithi eyinhloko, kodwa usebenzisa yiphi ingqikithi? Ngithande futhi ngaphezu kwanoma yini umbala wewolintshi wemiphetho
Lol .. Lokho akuyona i-OS, yi-UEFI yebhodi leGigabyte.
Impela. Kuyisixhumi esibonakalayo se-UEFI
Yup ... njengoba osebenza nabo isaac ne-eVeR besho, kungumfanekiso wesixhumi esibonakalayo se-UEFI sebhodi yomama yeGigabyte 😉
I-athikili enhle kakhulu, vele uyilondoloze njengentandokazi ngekusasa.
Siyabonga ngokumisa ngo ...
Sawubona, ngenxa yelukuluku.
Njengoba umbhali wokuqala esho ukuthi yeluleka ngokungakhubazi i-uefi ngoba unezinzuzo ezisebenzayo, ngabe kukhona owaziyo ukuthi ziyini?
Ngokubona kwami ​​(okomuntu uqobo lwakho ngendlela), i-UEFI yisixazululo senkinga ebingakabikho; Ngingomunye walabo abacabanga ukuthi kungenye impoqo yeMicrosoft (eyodwa ngaphezulu), kubakhiqizi behardware ukwenza lula ukusetshenziswa kwemikhiqizo yabo nokwenza kube nzima emncintiswaneni futhi ngenhlanhla, benze ukwakheka kwe-OS yabo (njenganoma ngubani othola ikhompyutha ene-UEFI ne-Windows 8 efakwe kuqala angabona). Noma kunjalo, ngiyaphinda, lowo ngumbono WAMI uqobo, ngakho-ke ngincoma ukuthi wenze usesho olusheshayo ku-San Google ngezinzuzo zamagama UEFI + futhi uzothola izixhumanisi zolwazi olwanele ongazakhela olwakho uvo.
Ah! futhi ngiyabonga kakhulu ngokuma ubeke amazwana ...
kulungile ngizobheka-ke, kepha umbuzo owodwa kuphela ngalesi sihloko, busho ukuthini ubhuthi wefa?
Akuyona i-UEFI efanayo nesandiso se-safeboot, eyodwa ivela ku-intel enye ivela ku-MS. I-UEFI yinto efana ne-IPv6, iza ukuxazulula izinkinga eziningi ezikhiqizwe emashumini eminyaka edlule. Kusetshenziswa i-GPT kunqoba imikhawulo ye-MBR ngosayizi nobukhulu bokuhlukaniswa okungu-4 kudiski ngalinye. Isebenza futhi kumodi "emsulwa" engama-64-bit, ngokungafani ne-BIOS, eseseyi-16-bit. Ngokwami, izikhathi okufanele ngisebenzise i-multiboot ngisebenzise i-clover EFI (ibuye iqale i-OSX), ivikela ngokuzenzakalela i-OS ifunda amafolda asesahlukanisweni sokuqala se-VFAT. Futhi uma izinhlelo zingaqali, sebenzisa i-USB ebukhoma noma i-CD, ukufinyelela lokho kwahlukanisa kokuqala bese ususa noma uhambisa amafolda.
Yebo, ngicacile ukuthi i-UEFI ayifani ne-Secure Boot, okwenzekayo ukuthi into ebivele idingeka ("ukuvuselelwa" kwe-BIOS) ukugcwalisa ukusilela okunqwabelene ngokuhamba kwesikhathi nokuthuthuka kobuchwepheshe, Iphambukile endleleni, ikakhulukazi ngenxa yethonya leMicrosoft, futhi ukwelashwa kugcine sekukubi kakhulu kunesifo.
Ngakolunye uhlangothi, isiphakamiso osinikezayo sisebenza ngokusobala, okwenzekayo ukuthi ezimweni eziningi, uma usisebenzisa kukhompuyutha ephathekayo ene-Windows 8 efakwe kuqala, ulahlekelwa iwaranti yemishini ngenxa yokususa noma yokuhambisa amafolda wokwahlukanisa asethwe yi-OS leyo
Ufuna ukwazi ngokulahlekelwa iwaranti. Uma kukhompuyutha entsha ngilungisa usayizi wokwahlukaniswa kwamawindi bese ngakha amasha ukufaka i-linux, ngabe lokho kungenza ngilahlekelwe nayisiqinisekiso se-laptop?
Okokuqala ukuthumela okuhle futhi okwesibili bengifuna ukubona ukuthi ungangisiza yini.
Okwenzekayo ukuthi ngineCompaq 18 All-in-On futhi iza namawindi 8 ngaphandle kwebhokisi futhi engifuna ukukwenza ibhuthi ekabili enamawindows 7.
Futhi ngenze konke ngokuhlukanisa idiski ukuze ngikwazi ukufaka amawindi kulolo hlukaniso.
Futhi vele faka i-BIOS bese ususa imodi yokuqalisa ephephile bese unika amandla imodi ye-UEFI.
Manje inkinga ukuthi lapho ngifaka windows ... engxenyeni "yokufaka izinketho ezithuthukile" ngikhetha ukwahlukaniswa kwediski engikudalayo futhi kungitshela lokhu "iWindows ayikwazi ukufakwa kule diski. idiski ekhethiwe inesitayela sokuhlukanisa i-GPT »empeleni lokho kungitshela ngakho konke ukwahlukanisa enginakho.
Ngisicwaningile isixazululo ku-inthanethi kepha ngithola isixazululo kuphela kubantu abafuna ukufaka kalula i-windows7 hhayi i-Dual boot ngoba ngezinye izixazululo kuzofanele ngisuse ukwahlukanisa kwami ​​kanye nohlelo lwe-wimdows 8 ukuze ngikwazi ukulifaka futhi yilokho engingakufuni.
Ngingakuthokozela uma ungasiza
Iningi lamabhodi womama wedeskithophu eza ne-boot legacy inikwe amandla.
Yebo, kepha izinto ziba nzima uma kuyilaptop ...
U-Andy Z kusho
Ngithi okungenani kuMama AsRock wami i-UEFI boot evikelekile ikhubazekile, into eyangidonsela amehlo
Phendula u-Andy Z
INDLELA YOKWABISA !!!
Uma ngifuna ukufaka kuphela uhlelo lokusebenza engiluthandayo futhi manje, akufanele kube njalo!
Lokho kwakungaphambilini, ubuningi bekufanele ulungiselele i-BIOS ukuqala i-CD noma i-pendrive ngesithombe se-ISO ebesiqukethe ukusatshalaliswa okulungele ukufakwa. Yenye indlela yokusikhombisa ukuthi amakhompyutha weWindows avela kwaMicrosoft (hhayi lowo okuthiwa uyawathenga).
Sawubona, ngikushiya ividiyo yokuthi ungayenza kanjani, yize ingachazwanga kahle.
Inkinga ukuthi ufaka i-cd nge-ultraiso, ibheke. UDeu.
Iqiniso ukuthi, umnikelo wakho ubumuhle kakhulu, bengimane nje "ngihlela kabusha" ngencwajana entsha, enokulungiswa lokho.
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo,
Awufuni ukufaneleka ngoba ngaphandle kokuhumusha kwakho bekungeke kufinyelele ezandleni zethu.
Usizo lwesinyathelo 7.
Ngabe kukhona umuntu ongangitshela ukuthi yimaphi amafayela okufanele ngiwakopishe noma ngiqambe kabusha amagama ukwenza isinyathelo "7 Khohlisa inqubo yokuqalisa ezenzakalelayo"
Ngizamile kepha ngenze okuthile okungalungile ngoba kuphume kuphela ku-pront grub> futhi angikwazi ukungena kwiWindows noma kwiLinux, ngiyabonga ukuthi benginomfanekiso we-HD.
kukuhle njengokuhlala okuqukethwe ku-linux 🙂
Ngingomunye wabanenhlanhla leyo ndlela engu-1 imsebenzele, ngafaka ubuntu 14.04 64bit ku-Asus n56vb futhi iqiniso kwaba ukuthi konke kusebenza kahle ..
Ukuphawula kokuqala engikubeka kule bhulogi ukuthi iqiniso ukuthi ngiyilandele isikhathi eside.
ngiyabonga !! Jabulela
Bekufanele ngikuprinte lokhu ukuze ngikwazi ukukwenza kwi-laptop yami ye-XD
Okokuqala, ngiyabonga kakhulu ngalezi zincomo ngeSpanishi esiphelele.
Okwesibili, incwajana yami iyi-hp ene-win8.1 efakwe kuqala, ngikwazile ukufaka iDebian izolo kusihlwa futhi angisasikhumbuli isikhathi, ngiyazi ukuthi bekukuhle ngoba ngiqale kabusha futhi ngafaka i-win8, lapho ngiqala kabusha ngikwazile ukungena ngokucindezela i-F9 nokukhetha inketho ye-Debian yami, evule i-Grub yami ngakho-ke konke okuhle. Ngakho-ke umbuzo wami usezincomeni 1 ku- "Faka i-Grub" Ngingafaka kuphi i-grub ukuze ngiyenze i-bootloader ezenzakalelayo? Kufanele kube esehlukanisweni lapho i-windo $ bootloader ikhona? .
Qaphela: Ngifake nge-UEFI inikwe amandla.
Uma ufuna futhi ungabuza esithangamini, abafana bahlala bezimisele ukusiza http://foro.desdelinux.net/
Okokuqala ngiyabonga ngale ndatshana ethokozisayo lonke ulwazi.
Yize ngingenakho okuhlangenwe nakho kule ndaba, ngiyayiqonda le migomo futhi ngingasho ukuthi ngokuphenya ezinkundleni eziningi nakumabhulogi, ngikwazi ukufeza kalula i-boot boot ngempumelelo, indlela elula yokukwenza ukufaka i-BIOS ngqo naku Ukulungiselelwa kwe-EUFI ngikuyekisile futhi ngakushiya Ngqo ngafaka ukufakwa kobuntu ngiyazi ukuthi ubuntu buyayisekela i-uefi kepha ngabona ukuthi izosebenza, ngabe sengifaka i-os eyisiqalo ngakho-ke ngingaqhubeka nokufaka i-OS's grub efakiwe ingu-1.99 Kufanele ukushiwo ukuthi ngafaka ubuntu kuhlukaniso olufanayo lwamawindows engibukeka ngixakile ngoba ngiyaqonda ukuthi kusebenza ku-ext.
I-Noe Interiano kusho
Iqiniso ngukuthi ngicabanga njengabaningi ukuthi kungukucindezelwa kweMicrosoft ngoba akusizuzisi nakancane, kuyinto enhle ukukwazi ukufaka iLinux neWindows 8 kukhompyutha efanayo.
Phendula kuNoe Interiano
Ngidinga usizo kwi-netbook yesikole, Ubuntu ifakwe ngamawindows 8.1 kodwa uma uyiqala ivela kuphela futhi iqala, ilayisha Ubuntu, ochwepheshe bakhombisa ukuthi iWindows 8.1 ifakiwe futhi uyibona kuma-disk disk partitions.
Umbuzo wami ungaba nawo ekuqaleni amasistimu amabili bese ukhetha ukuthi iyiphi ofuna ukusebenza nayo.
Umhlahlandlela wezinyathelo okufanele uzilandele,
Uma ungakxazululi lokho kubheka lapha
ku-inthanethi kunokuningi okufakiwe okukhuluma ngezilungiselelo ze-grub, inketho ezenzakalelayo, isikhathi, isithombe sangemuva ...
U-Alfredo Marin kusho
Sawubona sithandwa ngifunde le ndatshana futhi iqiniso libonakala kimi liheha kakhulu angazi okuningi ngokulungiselelwa, kepha nginenkinga, kukhompyutha yami ngine-windows 7 ne-Fedora efakiwe, manje inkinga ukuthi angikwazi ukuqala ngokuphepha imodi kumawindi engingathanda Ungangichazela ngendlela elula ukuthi yini okufanele ngiyenze ukuze ngikwazi ukwenza lo msebenzi, imikhonzo nokubonga ngizobe ngilinde impendulo yakho ... 🙂
Phendula u-Alfredo Marin
Sawubona Alfredo, ngingahle ngibe nephutha kepha indlela yokungena kwimodi ephephile isekhona ngaphakathi kwe-windows boot, ngakho-ke ngokushesha ngemuva kokukhetha ukungena kwe-win7 ku-grub qala ukucindezela u-F8 bese uphinda njalo ngemizuzwana emibili ukuze iwindi lesikhathi lingadluli, lokhu kwenziwe njalo futhi uhlelo olulodwa lokusebenza aludingi ukuthinta ukuqala kolunye.
Ekugcineni engikwenzile ukufaka u-Debian wami othandekayo bese ngifaka lolu hlelo lomshini, i-virtualbox, lapho ngafaka khona i-win7 kweminye imidlalo 😀 Ngale ndlela ngihlala ngiqala eLinux futhi uma ngifuna ukudlala ngivula umshini obonakalayo.
Bengizibuza ukuthi ngabe UNGAKHO KUPHELA ukufaka i-linux kusuka ku-boot legacy?
I-pc yami ingelinye lamacala owasho ukuthi ayemukeli isiginesha ye-UEFI yanoma iyiphi i-OS ngaphandle kwamawindows 🙁
I-athikili enhle. Siyabonga ngokuhumusha.
Sawubona, ngabe othile angangisiza ngifuna ukuqala ku-usb futhi lapho ngenza imenyu ye-boot isikrini siba mnyama futhi i-gion iyabenyeza futhi ayiqali futhi ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi kufanele ngicime uefi kusuka ku-bios kodwa kuyenzeka ungangivumeli ukuthi ngiyivimbele futhi angazi ukuthi kungani nginamawindi 7 ngabe kukhona umuntu ongangisiza
Ku-bios (kuya ngokuthi kuyini), kweyami okungenani ngisondela engxenyeni yokulungiswa kwebhuthi, kukhona into eseduze ebizwa nge- "Legacy Mode", kufanele wenze kusebenze imodi yefa, ngakho-ke imodi ye-uefi izoba ikhubaziwe, ngemuva kwalokho lungiselela i-boot mode mode boot ukushiya i-USB njengezinketho zokuqala, gcina izinguquko bese uphuma. I-bios yekhompyutha yami iyangixwayisa ukuthi ushintsho olwenziwe kuma-bios lungathinta ukuphepha kwemishini namanye ama-slop, ngakho-ke ikucela ukuthi uthayiphe inombolo kwikhibhodi ekubeka khona lapho esibukweni, lapho lokhu sekwenziwe system iqala ngemodi yefa (ejwayelekile). Sanibonani.
Ngikuthandile okuthunyelwe kwakho, okwamanje angazi ukuthi ngiyifaka kanjani i-Linux, empeleni bengizothanda ukukwazi ukuqala iPuppy Linux, ngizoqhubeka nokuphenya ukubona ukuthi ngiyakuthola yini, kepha akungabazeki ukuthi i-athikili yakho ingisizile ngaqonda ubugqila lapho sifaka khona amawindi amancane, kahle kwabanye, akangiphindi futhi
Ngisanda kufaka iWindows 270 kumshini we-Samsung NP7 waseColombia kwimodi ye-efi, ngithole ukuthi uefi wasefektri uyasebenza, kepha ngaphandle kwe-boot evikelekile, ngithole nokuthi inenketho ku-uefi bios, ukususa! Onke amasiginesha edijithali (izitifiketi ze-efi) eza nemishini futhi kukhona nenketho yokwengeza nokufaka okunye enakho efemini ngeWindows 8 nganoma yisiphi isiginesha yedijithali yanoma yiluphi uhlelo lokusebenza, ngakho-ke ngibona ukuthi iSamsung isasebenza ayikwamukeli ukubekwa kwe-boot evikelekile…. noma ayifuni ukuwela kumkhawulo womsebenzisi ukufaka kuze kufinyelele kumawindows XP …… ngoba le laptop inokukhetha ukusebenzisa i-safeboot ngento exakile ebizwa nge-csm os ……
Siyabonga ngokuthunyelwe…. Njengoba ngikhumbula, ngazama ukufaka windows 7 kumodi ye-efi kwi-acer laptop futhi leyo laptop ayilethi izinketho ze-safeboot ……. ngakho-ke akukho okungenziwa ngaphandle kokubuyisela ngohlelo lwemboni… ..
Sawubona… i-athikili ethokozisayo… kepha ake sifike ephuzwini, ngoba ngifikile ekhasini lakho, ngoba nginenkinga yokumiswa kwe-uefi kuthebhulethi yami yaseShayina i-pipo w4 nge win 8.1 pro…
Bengifuna ukufaka ubuntu okwehlukanisweni (ukwahlukanisa engingakwenzanga esikhaleni esifakiwe lapho kufakwa khona uhlelo lokutholwa kwamawindi) ebelingenazo izinkinga, kepha lapho ngivuselela, kwavela isikrini esimnyama esine-efi shell version 2.31 lapho kuzofanele ufake imiyalo kuphela ... Ngingene ekuphumeni, (umyalo kuphela osebenzayo) futhi sengibuyile kuma-bios ...
Ngaphambi kokufakwa kobuntu, bengithathe imodi ephephile uefi, ngiyibeke kwimodi yefa, engiyenza kusuka kukhonsoli njengomlawuli ... into exakayo ukuthi manje imodi yomphathi wamawindi ayibonakali njengenketho ye-boot ohlwini lokumiswa kwe-bios… uefi kuphela.
kusuka kuma-bios ngikunikeze ukucushwa okuyinkulungwane kepha akukho okungisebenzelayo, ngisho nokhiye we-f wekhibhodi ye-usb exhunywe kuthebhulethi ... ayitholi i-usb pendrive, izinkumbulo ze-sd, akukho lutho lwangaphandle ngokusobala ... kuphela ikhibhodi ...
manje imibuzo yami yile elandelayo ... kungenzeka yini ukuthi umsebenzi we-p8.1 we-wXNUMX wokuthola kabusha osebenza kwimemori ye-usb usebenze njenge-boot loader? ngaphandle kokungatholi lutho oluvela ku-usb?
Ingabe ikhona indlela yokubuyisa ithebhulethi kusuka ku-pc, ngohlelo lwe-boot noma ngaphandle kokufaka amashayeli noma ama-bios? Ngibonile ekhasini elisemthethweni lethebulethi ukuthi kunezinhlelo zokufaka umshayeli nge-PC, kepha ngokusobala zenzelwe ithebhulethi ye-Android…. kuzoba nendlela efanayo yamawindi?
Ingabe ukhona umyalo wokuthi kusuka kugobolondo le-efi, kungiholela ekuqaliseni kabusha amawindi, noma ukusetha kabusha ithebhulethi ngokuphelele, noma ukungingenisa futhi emhlabeni wamawindi?
Noma kufanele ngiyise kuchwepheshe?
ngiyabonga ngezimpendulo zakho kusengaphambili ... imikhonzo evela eChile!
Sawubona, kubonakala sengathi lapho wenza i-pendrive nge-RUFUS kufanele ukhethe uhlobo lokwahlukanisa okufanele ukhethe i-GPT ye-UEFI futhi ngaleyo ndlela i-bios iyabona ... ngiyahlola .. uma kusebenza, ngizokutshela Ama-SLDS aseChile
Enye inketho ingaba ... ukufometha konke bese ufaka iWindows7 bese Ubuntu?
UJuan Acuña kusho
Njengamanje ngizozama yonke into, ngiyabonga kakhulu ngokuninakekela, futhi kungekudala ngizokunikeza izimpendulo .. uma senginazo. sinelungelo elilodwa ..
Phendula uJuan Acuña
Indlela efanele yokwenza iWindows boot boot isebenze nge-EasyBCD ichaziwe kule webhusayithi:
Imayelana nokwenza ukwahlukanisa kweGrub engezansi kwamawindi nokuthi isebenze, uma i-linux ifakiwe, kufanele usebenzise i-EasyBCD 2.2
Lokhu kufakwa kwe-linux kuzokuvumela ukuthi ukususe ngokuphelele ngaphandle kokuthinta ukuqala kweWindows okungenani.
UHaber Antonio, okuyingxenye yesifundo oxhumanisa kuso ukumiswa kwe-EasyBSD? Ngoba ngifunde lonke isifundo futhi akukho lutho oluhlobene nalokhu.
Nginekhanda elanele nge-Win8-Debian boot ebusayo, ukuqala ukuvakasha (mhlawumbe lokhu bekuwukuphela kwento obuhlele ngayo) nokufunda amakhasi alinde uhlobo oluthile lolwazi, futhi ekugcineni uthole okunye okungabalulekile
I-athikili ayinayo imininingwane ngenqubo ezokwenziwa, uyayisho kuphela, kunjengokuthi ngithi, ukudla, ungakhetha phakathi kwe-pizza noma i-pasta, kepha ayikutsheli ukuthi ungapheka kanjani i-pizza noma ukuthi ungalungisa kanjani i-pasta isosi oyifunayo.
Ngine-Asrock H61M-VG3 futhi nginale nkinga, ngoba ngiyaqonda okuncane futhi kungukuhlangenwe nakho kwami ​​kokuqala ukufaka amasistimu amabili asebenzayo. Kuza neWindows 8 futhi angikwazanga ukufaka iWindows XP kuyo, ngize ngiyenze ngokushintsha okuthile ku-BIOS. Isebenze kahle, kepha lapho iqala kabusha ayizange ingibonise noma iyiphi inketho yokukhetha phakathi kuka-8 no-XP. Ngafaka i-EasyBCD "ngiyilungisile" futhi akukho okunye okwaqala. Lithe kube nephutha. Ukuthi ifayela belilahlekile ku-system32. Ngizamile WONKE amathumba engingawathola kuwebhu futhi namanje angikwazi ukufinyelela kuwo. Ngiqalekisa usuku engithenga ngalo lolu suku lomshado.
I-athikili enhle kakhulu ngifunde okuningi futhi njengoba ngicabange ngayo futhi ngifika esiphethweni sokuthi kuyindaba yokwakhiwa kwezakhiwo, bengikade nginganakile kangako ku-OS kuze kube cishe inyanga edlule ngithole le nkinga neviki edlule ngithole i-hp engakuvumeli ukufaka ukwabiwa kwe-linux, ungazami lutho ngoba akuyona ikhompyutha yami kepha ngicabanga ukuthi kufanele ikwazi
Nge-easybcd ungakwazi. Kuhlolwe kuma-eMachines 355 anamawindows 10 alandela leli gama eliqanjwe kabusha http://es.ccm.net/faq/10661-realizar-un-multiboot-con-easybcd
Sawubona, ngifuna ukwenza umbuzo, ngine-boot boot PC ene-Windows 7 ne-Ubuntu, kepha ngifuna ukushintsha iWindows 7 ibe yiWindows XP. Umbuzo wami ukuthi inqubo kufanele ifomathe futhi ifake i-XP kusabelo seWin7? … Lokho kulula noma kukhona okunye?
Sawubona ngifuna ukwenza umbuzo, nginewindows 10 kepha ngifake i-kali linux, kepha ngikhohliwe ukwenza i-boot ebili, lapho iqala i-windows 10 ayisasaqali uma kungeyona i-kali linux, sengivele ngazama ukubuyiselwa kwamawindi izindlela, othile angasiza?
ukunqoba payta kusho
Nginenkinga ngiwine i-7 futhi ngafaka i-linux centos 7 kokunye ukwahlukanisa kepha i-aura aura njengoba ngikhuluma ebhuthini ekuqaleni ukufaka abafelokazi 7
Phendula ku-victor payta
lapho ngifaka i-OS engasindi kusuka ku- windows 10 Kungenzeka yini ukuthi ngilahlekelwe izici eziningi ezijwayelekile?
EA Mújica D kusho
I-Ubuntu Global Menu iyafa, imenyu ibuyiselwa emafasiteleni ku-Ubuntu olandelayo njengempilo yonke